Cesc Fabregas ficiladii Anshax darro ee uu ku kacay oo Dunida ay la yaaban tahay. - iftineducation.com
iftineducation.com – Cesc Fabregas ficiladii Anshax darro ee uu ku kacay oo Dunida ay la yaaban tahay.
Dunida ayaa la yaaban ficillo anshax xumo ah oo uu ku kacay ciyaartoyga xulka qaranka Spain iyo Chelsea ee Cesc Fabregas oo fasax tamashle ah kaga maqan kooxdiisa, wakhti maalmo kooban ka hadhsan yihiin bilowga xili ciyaareedka cusub ee 2016/17.
Laacibkan 29 jirka ah ayaan helay fasax kooban oo uu siiyey tababare Conte kadib 16 maalmood oo tababar adag uu dhamaan ciyaartoyga kooxda siinayey, ayaa waxa uu Cesc u socdaalay waddanka Maraykanka iyadoo ay wehelinayso xaaskiisa Daniella Simaan, waxaana laga duubay muuqaallo aanay jeclaysanin dadka taageera ciyaartoygan wakhti uu ku sugnaa Beverly Hills, California.
Fabregas iyo xaaskiisa Daniella ayaa waxay tageen xeebta iyagoo kaxaystay doonni yar, waxaana laga duubay isaga iyo marwadiisa oo falal dhaqan xumo ah ku dhex samaynaya xeebta.
Cesc ayaa la filayaa in uu kooxdiisa u safto ciyaarta ugu horreysa ee tartanka Premier League oo Chelsea ay waajihi doonto West Ham Isniinta.